Dhaqanku waa taariikh fara badan, waxa aynu leenahay munaasabado badan oo waaweyn oo Iswiidhan laga xuso. Waxa ka jira Iswiidhan dhaqamo badan oo la kala dooran karo oo ka jira matxafyada, tiyaatarada iyo dhinaca muusigga.
Muusiig, tiyaatar, farshaxan iyo buugaagta ayaa ah tusaalaha dhaqanka, badiyaa waxa degmada ka jira shaneemooyin, iyo tiyaatarro.
Rugta kutubta waxaa yaala kutub ama buugaagta caruurta iyo kuwa dadka waawayn oo ku qoran luuqado kala duwan, joornaalo kala duwan, koorasyo luuqadaha ah,warbixinta bulshada, muusig, filim, kombiyuutaro iwm. Rugta kutubta lacag la’aan ayaa buugta looga amaahan karaa. Si aad buugta u amaahato waxaad u baahan tahay kaarka amaahda. Kaarkuna waa lacag la’aan. Hadii aad wax amaahato axaad haysan kartaa 4 wiig inta badan, balse waa laga yaabaa in uu waqtigu intaa ka yaryahay ee ka hubi rasiidka..
Maktada waa meel wanaagsan oo adiga wadanka ku cusub ka heleysid aqoon ku saabsan mushtamaca iswiidhan iyo aad adiga ku baran kartid luqada iswiidhishka.
Hidde-dhaqameedyada iyo ciidaha
Hidde-dhaqameed waa wax la caadaysto oo weligii la samayn jiray. Ciid waa dhacdo muhimad gaar ah leh oo badiyaaba loo dabbaaldego, tusaale ahaan xuska dhimashada Nebi Ciise (Påsk). Hidde-dhaqameedyo iyo xusas badan oo Iswiidhan looga dabbaaldego waxay ka soo jeedaan xagga diinta. Qaybo hidde-dhaqameedyada ka mid ahi waxay ku sal leeyihiin kiristaanka. Qaybo kale waxay ka soo jeedaan wakhtiyadii ay dadka Iswiidhan lahaayeen ilaahyo badan sida Tor iyo Oden. Wakhtigan xaadirka ah hidde-dhaqameedyada iyo xusaska diimeed waxay yihiin fasaxyada lagula kulmo ehelkaiyo asxaabta.
Habeenka sanadka cusub, xuska dhimashada Nebi Ciise (påsk), xuska 1 may, habeenka bartamaha xagaaga (middsommar) iyo kirismas-ku waa qaar ka mid ah ciidaha looga dabbaaldego Iswiidhan. Markaa dadka intooda badani waxay fasax ka yihiin shaqooyinkooda.
Waqlal, aroos, maalmaha dhalashada iyo aaska waa waqtiyo muhiim ah oo la muujiyo inta la nool yahay.
Shabakadda dhaqan ee Iswiidhan
Ururada samafalka ah oo ujeedadooda tahay in ey badiyaan sida lagu helo dhaqanka iswiidhishka iyo xiisaha lagu badinkaro - SE
Meeshaan waxaa ka heleysaa isku xiriiriye oo maktabyada bulshada Iswiidhan - SE
Maktabadda caalamiga ah - IB